JOS Nepal » फोटो फिचर
रोल्पा थबाङ गाउँ पालिका उवा का केहि रमणीय फोटो हरु
माओवादी नेताहरु धुरुधुरु रोयको अर्थात् पुर्णरुमा हतियार बिसाएको ठाउँ पुर्वरुकुम, चुनावाङ्ग एकपटक जानै पर्ने ठाउँ !
ऐतिहासिक चुन्बाङ - माओवादी नेताहरु धुरुधुरु रोयको अर्थात् पुर्णरुमा हतियार बिसाएको ठाउँ पुर्वरुकुम, चुनावाङ्ग एकपटक जानै पर्ने ठाउँ भेरीडाँडा हाल भुमे गाउँपालिका ९ रुकुम पुर्व जहाँ तत्कालीन माओवादी केन्द्रको ऐतिहासिक बैठक सम्पन्न भएको ठाउँ, अध्यक्ष कामरेड प्रचण्ड बसेको घर ! अनि स्वर्गीय खुशिराम पाख्रीनको.....
मेरो टाउको फुत्यो रगत आउदा तपाईं लाइ कति शान्ति मिल्यो है ?
प्रहरी म अनि तपाईं आन्दोलनकारी तपाईंलाइ सानो चोट लाग्दा पत्र पत्रिका, अन्लाइ, मिडिया र टिभिहरुमा मुख्य समचार बन्छ् । तपाईले हानेको ढुङ्गाको टुक्राले मेरो टाउको अनि गर्धनमा लाग्दा तपाईं कति खुशि हुनुभो । मेरो टाउको फुत्यो रगत आउदा तपाईं लाइ कति शान्ति मिल्यो है ? तपाईलाई तपाईको जीत, माग अनि अधिका पुरा भो.....
ईलाका प्रशासन कार्यलय घर्तिगाउ बाट आज देखि नागरिता पाईने !
रोल्पा - ईलाका प्रशासन कार्यलय घर्तिगाउ बाट आज देखि नागरिता पाईने भयको छ । पाँच महिना यता अधिकृत नहुदा सबैकाम थप्प भएको थियो । अधिकृत आएपछी आज एक कार्यक्रम का बिच स्वागत गरियको छ । माडी गाउपालिका अध्यक्ष नन्द बहादुर पुन जीउ सहितको टोलि गृहमन्त्रालय गएर पहल गरेपछी मात्र अधिकृत आउन सफल भयको हो । यहाँहरुलाई.....